Topnepalnews.com | मेडिकल संचालन गर्दै आएका भारतिय नागरिकको निर्मम हत्या
मेडिकल संचालन गर्दै आएका भारतिय नागरिकको निर्मम हत्या
Posted on: February 19, 2017 | views: 750
पप्पु गुरुङ्ग-दोधारा चाँदनी,फागुन ८ – दोधारा चाँदनी क्षेत्रमा बिगत लामो समय देखि मेडिकल संचालन गर्दै आएका एक भारतिय नागरिकको गए राती हत्या भएको छ् । दोधारा चाँदनी नगरपालिका वडा नं. ७, बाबाथान बजारमा बिगत २०÷२५ वर्ष देखि निरन्तर मेडिकल संचालन गर्दै आएको पिलिभित जिल्ला, माधवताण्डा थाना, नौजलीया ग्राम निवासी बिजय कृष्ण हिरा– ५० को गए राती दोधारा चाँदनी नगरापलिका वडा नं. १०, बैतिफाँटा, जगबुडा नदीको नजिक निर्मम तरिकाले हत्या गरिएर फालिएको अवस्थामा फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ ।
उनि माथी धारिलो हतियारले पिट्यु, घाँटी तथा टाउकोमा प्रहार गरि निर्मम हत्या गरिएको हो । हिजो साझ दोधारा चाँदनीको बाबाथान बजारबाट करिब ७ बजे आफ्नो मेडिकल बन्द गरेर मेडिकल संचालक हिरा घर गएको बाबाथान बजारका स्थानिय ब्यापारीहरुले बताएका छन् । उनि बिगत लामो समय देखि दोधारा चाँदनी नगरपलिका वडा नं. ७, बाबाथान बजारमा रहेको जसमाया थापा मगरको एक भवनमा कोठा भाडामा लिएर आफ्नो मेडिकल संचालन गर्दै आएका हुन् ।
दोधारा चाँदनीको कुतियाकवर जाने मुल बगर सडक खण्ड हुदै गएका मेडिकल संचालक हिरालाई बैतिफाँटा (कुतियाकवर जाने किस्ती नजिक) मा उनको क्रुर तरिकाले हत्या गरिएको प्रहरीले जनाएको छ् । “निकै निर्मम तथा क्रुर हत्या गरिएका छ्” ईलाका प्रहरी कार्यालय दोधारा चाँदनीका प्रहरी निरिक्षक बीरदत्त पन्तले बताउनुभयो ।
अबेर राती सम्म मेडिकल संचालक बिजय कृष्ण हिरा घरमा नआएपछि हिराको छोरो बिश्वजित हिरा र उनका धर्मपत्नी तृप्ती हिरा खोज्न उनको बाबाथान मेडिकल सम्म पुगेका थिए । बाटोमा फर्कने क्रममा छोरा बिश्वजित हिराले आफ्नो वाबुको रगतमा लतपत्त भएको चप्पल बाटोमा फेला पारेपछि उनले स्थानियलाई गुुहारेका थिए । करिब ९ देखि १० बजे हत्या भएको अनुमान गरिएको छ् । प्रहरीलाई स्थानियहरु खबर गरेपछि प्रहरी करिब १ बजे प्रहरी घट्नास्थालमा पुगेको थियो ।
बैतिफाँटा किस्ती तर्ने स्थानको बाटो नजिक मेडिकल संचालन भारतिय नागरिक हिरा माथी धारिलो हतियारले प्रहार भएको र उनलाई घिसारेर करिब २ सय मिटर पुर्व दिशा तर्फ लगरे थप धारिलो हतियारले प्रहार गरि हत्या भएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा खुलेको छ् । प्रहरीले हत्यामा प्रयोग गरिएको गुप्ती (चक्कु) को खोल तथा रगत लागेको रड घट्नास्थल नजिक बरामद छ् । “घट्नास्थाल सर्चको क्रममा हामीले गुप्ती (चक्कु) को खोल तथा रगत लागेको रड फेला पारेका हौ” निरिक्षक पन्तले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार हत्याको बारे क्षेत्रिय अनुसन्धान ब्युरोको टोलीले समेत अनुसन्धान खटिएको छ् । प्रहरी सहायक निरिक्षक बाशदेव अवस्थीको कमाण्डमा क्षेत्रिय अनुसन्धान ब्युरोको टोलीले घट्नाको अनुसन्धान थालेको छ् । प्रहरीले स्थानियहरु सोधपुछ जारी राखेको छ् भने भारतिय प्रहरी संग हत्याको बारे छलफल समेत गरेको प्रहरी श्रोतले जानकारी दिएको छ् ।
भारतिय नागरिक हिरा माथी पहिलो प्रहार भएको स्थान देखि करिब २५÷३० मिटर पुर्व÷दक्षिण दिशा स्थित उनले चढ्ने साईकल तथा झोलमा रहेको केही औषधीहरु तथा नगद रकमहरु प्रहरीले फेला पारेको छ् । मेडिकल संचालन भारतिय नागरिक सदा झै हिजो पनि करिब सा“झ ७ बजे बाबाथान स्थित रहेको आफ्नो मेडिकल बन्द गरेर फर्कने क्रममा उनको धारिलो हतियार द्धारा निर्मम हत्या गरिएको स्थानियहरुले बताएका छन् ।
मेडिकल संचालक बिजय कृष्ण हिरा दोधारा चाँदनीमा “दाह्’” डाक्टरको नामबाट प्रचलित थिए । दोधारा चाँदनीको सिमा पारीको गाँउ पिलिभित जिल्ला, माधवताण्डा थाना, नौजलीया ग्राम निवासी बिजय कृष्ण हिरा लामो समय देखि दोधारामा आफ्नो मेडिकल संचालन गर्दै आएको सोझो ब्यक्तीको रुपमा उनि परिचित हुदै आएका थिए । घट्नाको बारे स्थानियहरु संग सोधुपुछ जारी राखेपनि प्रहरीले कसैलाई पक्राउ गरेको छैन्, भने कस्ले हत्या भएको हो भन्ने बिषमा छानबिन चलिरहेको प्रहरीले बताएको छ् । हत्या भएको बिजयका कृष्ण हिराका धर्मपत्नी सहित एक छोरा र एक छोरी छन् । दोधारा चाँदनीको सिमा क्षेत्रमा समसाँझै गरिएको मेडिकल संचालक हिराको निर्मम हत्या भएपछि स्थानियहरुमा त्रास बढेको गएको छ् । हत्या भएको बिरोधमा दोधारा चा“दनीको बाबाथान बजार केही समय सम्म बन्द गरिएको बाबाथान बजार ब्यवस्थापन समितिले जनाएको छ् । प्रहरीले मतृकको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा पोष्टमार्डम पछि परिवारजनमा शव बझाएको छ् ।
बाटो ढुकेर योजनबद्ध तरिकाबाट हत्या
बाटो ढुकेर मेडिकल संचालक हिराको हत्याको प्रहरीले अनुसन्धान सुरु भएको छ् । सदा ८ देखि ८ः३० बजेको समयमा मेडिकल संचालक बिजय कृष्ण हिराले किस्तीमा नदी पार गर्ने समय हुन्थ्यो । प्रहरीको आशंका गरिएको ब्यक्ती, घट्नाको खबर गर्ने ब्यक्ती, परिवारजन लगाएत भारतिय प्रहरी संग सोधपुछ बढाएको छ् । प्रारम्भिक अनुसन्धानको बेला मेडिकल संचालक हिरामा पहिलो प्रहार भएपछि हत्याराले उनलाई घिसारेर करिब २ सय मिटर पुर्व दिशा तर्फ लगरे थप धारिलो हतियारले प्रहार गरि हत्या भएको देखिएको छ् ।
“२ देखि ३ जना हत्यारा हुनु पर्छ । ४ जना भन्दा बढी भएको भए हिरालाई चार हातखुट्टा समातेर झ्याकुटी बनाएर लग्थे होला तर घिसारेर लगेका छन्” एक स्थानियले भने । हत्यामा २ देखि ३ सम्म हत्यारा संलग्न रहेको स्थानियहरुले आंकलन गरेका छन् । सुनसान स्थान तथा अध्यारो रातको फाईदा उठाउदै बाटो ढुकेर बसेका हत्याराहरुले योजनाबद्ध तरिकाले उनको हत्या गरिएको स्थानियहरुको भनाई रहेको छ् ।
“दोधारा चा“दनीमा उनी सबैको लागी राम्रो मान्छे थिए ।” अर्का स्थानियले भने । उनी माथी लुटपाट गर्ने उद्धेश्यले उनको हत्या समेत नभएको स्थानियहरुको ठहर छ् । उनको झोलामा रहेको केही नगद रकम पनि झोलैमा सुरक्षित रहेको मेडिकल संचालक हिराका छोरी बबिता हिराका श्रीमान सकेश कुमारले बताए । कहिल्यै बिडी नपिउने मेडिकल संचालन बिजय कृष्ण हिराको झोलामा बिडीको प्याकेट समेत फेला परेको छ् । “कसैको आखामा हालेर नबिझाउने ब्यक्ती थिए” हिराको जवाई सकेश कुमारले भने ।
समाचार श्रोत अनुसार सामसाँझ देखि उक्त क्षेत्रमा भारतबाट आएका भारतिय नम्वर प्लेट मोटरसाईकलको अरु दिन भन्दा बढी चहलपहल रहेको थियो । तेज गतीमा उक्त मोटरसाईकलहरु भारतिय क्षेत्रबाट आएका थिए । नेपालमा उनको कुनै प्रकारको दुष्मनी नभएको सिमा नजिक रहेको बेतिफा“टामा भारतिय ब्यक्तीहरु आएर हत्या गरिएको समाचार श्रोतले अनुमान गरेको छ् ।
सदाझै ७ बजेको समयमा बाबाथान बजारबाट मेडिकल बन्द गरेर गाँउ घरमा औषधी दिदै आउदै गर्दै आएका मेडिकल संचालक हिरालाई हत्याराले बाटो ढुकेर एकान्त स्थान बैतीफाँटाको सुनसान नदीको छेउ बगरमा हत्या गरेको स्थानियहरु दाबी छ् । बाटो ढुकेर बसेका हत्याराले साईकलमा आईरहेको मेडिकल संचालक हिरालाई रोकेर पहिलो पल्टमै धारिलो हतियारले पिट्युमा प्रहार गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा खुलेको छ् । मेडिकल संचालकको कस्ले किन र कसरी हत्या ग¥यो भन्ने अनुसन्धानको बिषय बनेको छ ।